Yiba Ngumhlobo KaThixo Ngonaphakade!
Kufuneka wenze umgudu ukuze uzenzele umhlobo; kanti ngumgudu nokulondoloza umhlobo. Imigudu yakho yokuzenza umhlobo kaThixo uze uhlale unguye iya kuvuzwa ngeyona ndlela. UYesu wathi kwabo babekholelwa kuye: “Inyaniso iya kunikhulula.” (Yohane 8:32) Kuthetha ukuthini oku?
Unokunandipha inkululeko ngoku. Unokukhululeka kwiimfundiso zobuxoki kwanakubuxoki obuye basasazwa nguSathana. Unokukhululeka kwimeko yokungabi nathemba ejikeleze ubomi bezigidi zabantu abangamaziyo uYehova. (Roma 8:22) Abahlobo bakaThixo bakhululekile ‘nasekoyikeni ukufa.’​—Hebhere 2:14, 15.
Unokunandipha inkululeko kwihlabathi elitsha likaThixo. Hayi indlela emangalisa ngayo inkululeko onokuyinandipha kwixesha elizayo! Kumhlaba oyiParadesi, siya kukhululeka kwimfazwe, ukugula nakulwaphulo-mthetho. Siya kukhululeka kubuhlwempu nasendlaleni. Siya kukhululeka ekwaluphaleni nasekufeni. Siya kukhululeka kuloyiko, kwingcinezelo nakwimeko yokungabikho kokusesikweni. IBhayibhile ithi ngoThixo: “Uyasivula isandla sakho uze wanelise umnqweno wayo yonke into ephilayo.”​—INdumiso 145:16.
Abahlobo bakaThixo baya kuphila ngonaphakade. Ubomi obungunaphakade sisipho esixabisekileyo uThixo aya kusipha bonke abo bafuna ukuba ngabahlobo bakhe. (Roma 6:23) Khawufan’ ucinge into eya kuthethwa kukuphila ubomi obungenasiphelo!
Uya kuba nexesha lokwenza izinto ezininzi. Mhlawumbi uya kuthanda ukufunda indlela yokudlala isixhobo somculo. Okanye usenokufuna ukufunda ukuzoba imifanekiso okanye ube ngumchweli. Usenokuthanda ukufunda ngezilwanyana okanye izityalo. Okanye kusenokwenzeka ukuba ufuna ukuhamba uze ubone amazwe nabantu abahlukahlukeneyo. Ukuphila ubomi obungunaphakade kuya kwenza ukwazi ukuzenza zonke ezi zinto!
Uya kuba nethuba lokuzenzela abahlobo abaninzi. Ukuphila ngonaphakade kuya kukwenza wazi abanye abantu abaninzi abaye baba ngabahlobo bakaThixo. Uya kuzazi iziphiwo abanazo neempawu zabo ezintle, yaye baya kuba ngabahlobo bakho nawe. Uya kubathanda, yaye baya kukuthanda. (1 Korinte 13:8) Ukuphila ubomi obungapheliyo kuya kukunika ixesha lokuba ngumhlobo womntu wonke emhlabeni! Okona kulunge ngaphezu kwako konke kukuba, ubuhlobo bakho noYehova buya kukhula bomelele ngeyona ndlela njengoko kudlula iinkulungwane. Ngamana ungangumhlobo kaThixo ngonaphakade!
ILizwi likaThixo likhuthaza unxulumano lwamaKristu. Unokungenelwa njani kolu hlobo lonxulumano.